Tooftaan "Herd immunity" jedhamu nama miliyoona 800 vaayirasii koroonaaf saaxiluu akka malu ibsame - NuuralHudaa
Jiddugalli To’annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC)’n akka jedhetti, yoo tooftaa “Herd immunity” vaayirasii koroonaa to’achuuf yaalame, namootni miliyoona 800 ol vaayirasichaaf saaxilamuu qabu jechuun akeekkachiise.
Qondaaltonni fi dhaabbileen fayyaa idil-addunyaa tooftaa kana deeggaruu dhabanis, ogeeyyiin fayyaa osoo yaalamee jedhaa jiru.
‘Herd Immunity’ jechuun itti yaadamee namni heddumminaan vaayirasichaaf akka saaxilamu gochuun, akka hawaasatti immunitiin/dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu akka gabbatu gochuudha.
Haaluma kanaan Ardii Afrikaa uummata biliyoona 1.2 lama qabdu keessatti namoonni ‘Herd immunity’ kana horatanii vaayirasicha akka ofirraa ittisaniif, yoo xiqqaate namoonni miliyoonni 800 vaayirasichaaf saaxilamuu qabu. Kuni ammoo lubbuu namoota miliyoona 8.4 balaaf saaxiluu mala jedha CDCn Afrikaa.
Hogganaan WHO Dr Teedroos Adihaanoom Wiixata gaazexeessitootatti wayita dubbatu, namni vaayirasichaaf saaxilamee “Herd immunity” akka horatu gochuun saayinsiinis ta’e naamusa fayyaatiin sirrii miti jedhe.
October 24, 2021 sa;aa 5:59 pm Update tahe